Sidee loo helaa xiiro qumman daqiiqado yar gudahood? | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | La xiiray
Hadday daruuri tahay, raaxo darteed, moodhadh ama shaqo darteed ayaa u baahan, ragga badankood waa inaan ku xiiraa xoogaa joogto ah.
In kasta oo gadhku si teel-teel ah u soo galaan isbeddellada moodada, helitaanka xiirasho dhammaystiran waa mid ka mid ah caadooyinka ay tahay in nin waliba raaco.
Waa maxay tilmaamaha aan raaci karno si aan u xiirno qumman?
Ma aha inaad xiirto markii aad kacday. Waxaan ognahay in laxanka ay bulshada inta badan nagu soo rogto ay si dirqi ah noogu ogolaato inaan seexano. Haddii ay dhacdo inaan subax kasta xiirno ka hor intaysan guriga ka bixin, waa inaan xisaabi waqtiyada si fiican Markaa maahan inaad sameyso markaad sariirta kasoo boodo.
Maalin kasta xiirto. Si aanaan u xanaaqin wajigeena iyo si maqaarka wejigu uusan u dhib badneyn, waa inaan iska ilaali inaad xiirto maalin kasta.
Xiirashada qumman. Waxaan isticmaali doonaa alaabada ugu tayada fiican. Maqaarka wajiga ayaa ah mid aad u jilicsan una baahan daryeel gaar ah.
Iska ilaali finanka. Haddii aad ku xanuunsato xaaladan dhibka badan, waa inaad leedahay daryeel aan caadi ahayn. Dhakhaatiirta maqaarka waxay kugula talinayaan in mashiinada korontada lagu beddelo garbaha caadiga ah si loo qiimeeyo midka ugu xanaaqa yar.
Qoyaanka. Badeecooyinka badankood ee loogu talagalay "aftershave" waxaa laga sameeyaa aalkolo, qayb ka mid ah qallajisa maqaarka horay u burburay. Sidaa darteed, takhasusleyaashu waxay kugula talinayaan isticmaalka qoyaanka ama alaabada lagu sameeyo Aloe Vera.
Waxtarka biyaha kulul. Sidan ayaad ku heli doontaa taas timaha timaha u furan, marka mashiinku dhaafo waxaad helaysaa iska caabin yar.
Badbaadada in garbaha ay ku jiraan xaalad wanaagsan. Badeecadaha ganacsiga badankood ee garbaha la tuuro ayaa ballan qaada taas "Nolosha weligeed ah" ee alaabtaada. Muhiim ma aha in la dheereeyo isticmaalka iyaga aad u badan.
Waa inaad xusuustaa taas wajigeenu waa xarafka ugu horeeya ee hordhaca aduunka. Si aragti fiican looga yeesho shaqadeena iyo deegaankeena shaqsiyeed, waa inaad heshaa xiiro qumman.
Ilaha sawirka: Tuiris / Diario As
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Talooyin ku saabsan gadhka xiiran
Azure Vibes: Massimo Dutti wuxuu ku soo dhaweynayaa codadka badda tifaftirihiisii ​​ugu dambeeyay